9 AKANAKISA EKUVAKA GUTA MITAMBO YEAPPLE - NYORO
9 Akanakisa Ekuvaka Guta Mitambo yeApple
Iri zita remusoro, pachinyorwa chakareruka, rinoratidzika kunge hunyanzvi hweinjiniya ane dhigirii mbiri mumakomputa uye einjiniya. Zvinoita sekunge ari kuyedza kuongorora achitamba kuburikidza nemitambo pakuvaka guta achishandisa makomputa. Pfungwa yakanaka kwazvo hapana mubvunzo kana iri motto. Nezve izvi kumashure, ngatiedzei kufungidzira kuti chii mutambo wekuvaka guta?
windows 10 kurodha kwakanamatira pa 99 muzana
Ini ndinofunga tinogona kupatsanura mitambo yakadaro muboka remavhidhiyo mitambo inoteedzerwa paPC kana android yakavakirwa nharembozha, ine mutambi achigadza iro basa reguta kana reguta kuronga. Nechizvarwa chitsva ichive chakawanda semacomputer zvichienzaniswa nevakuru vavo pakave nekukasira mune dzakadai zvemagariro, maguta-anovaka cum mafoni emitambo mamodheru vachishandisa iyo Android tekinoroji.
Yekutanga yakadaro Android-yakavakirwa guta rekuvaka mutambo unonzi Utopia yakagadzirwa muna 1982. Rudzi rwunotevera rwemimwe mitambo yepamusoro yekuvaka maguta yeApple yakauya muna1993 nekuuya kwemutambo unonzi 'Ceaser' zvichibva pamuenzaniso weguta rekare. Roma. Mutambo unotevera unonakidza nemagadzirirwo akagadziridzwa achienderana uye achikurudzira hupfumi nemutambo wemutambo wenguva yacho wakauya muna 1998 nhevedzano inonzi Iyo Anno nhevedzano.
Izvi zvakaenderera mberi zvikateverwa nekusunungurwa muna 2003 mutambo wainzi 'Sim City 4' uyo waionekwa semumwe wemitambo yakanakisa asi uchionekwa semutambo wakaomesesa kuvanhu veiyo mhando uye kunyangwe makore gumi mushure mekuburitswa . Uku kufambira mberi mumitambo kwave kuenderera mberi kubva pakuvamba nekuwedzera mumitambo yekuvaka yeguta nguva nenguva, paAppstore. Tataura izvi, ngatiedzei kuona akanakisa ekuvaka guta-mitambo ye android inowanikwa seyakanakisa sarudzo yemari yako muhurukuro yedu pazasi:
1. Nzvimbo Yekugara
2. SimCity Kuvaka
3. Pocket Guta
6. Musha WeGomba
7. Mugadziri Mugadziri
8. Guta Island 3
Akanakisa Guta Kuvaka Mitambo yeApple
Iyo yemahara kutamba vhidhiyo mutambo wakagadzirwa naBethesda Game Studios uye yakaburitswa naBethesda Softworks mune iyo mutambi anofanirwa kuvaka nekunyatso gadzirisa yake yega vault, yekudonha Shelter. Iye anofanirwa kutungamira uye kupa madhairekitori kune iwo mavara anogara muvhavha, inozivikanwa sevanogara.
Mutambi anofanirwa kuchengetedza vagari kugara vachifara uye kuzadzisa zvido zvavo zvekudya, mvura, uye simba. Anofanirwa kununura vanogara pamusoro pevapambi uye kuramba achivandudza zvivakwa zvavo. Vagari vanogona kuitwa kuti vabatanidzane pamwe nekuzvizadza pachavo nekubatanidza munhurume nemukadzi anogara kana kumirira kuti vamwe vanogara kubva kunzvimbo dzakasviba.
Pfungwa iri kumashure kwemutambo ndeyekugadzira yakanakisa vault, kuongorora masango, uye kuvaka nharaunda inofara uye inobudirira yevagari.
Pakazara pakange paine bhegi rakasanganiswa rezvekuita nezve mutambo. Izvo zvakadaro yaive, imwe yemitambo yakanakisa yekufananidza ichinge yadomwa Yakanakisa Game Mubairo 2015 yeakanakisa nhare / ruoko rwakachengetwa rwegore. Pamusoro peizvi, yakapihwa iyo yegore regumi D.I.C.E. Mubairo uye iyo '33rd Goridhe Joystick Mubairo muMutambo Wenhare wegore uye iwo Akanakisa Nhare Yemitambo zvikamu zvakateerana.
Uyu mutambo wakatanga muna 2014 wakagadzirwa neTrack Twenty uye wakaburitswa nemagetsi Art yemitambo yekutamba. Inogona kuteedzerwa yemahara pamutengo pane iOS Appstore neGoogle play zvitoro asi paApple neAmazon Appstore inogona kutorwa pamutengo.
Uyu mutambo unowanikwa zvese mune imwechete-mutambi uye yakawanda-mutambi modhi inoteedzera chaiwo-ehupenyu mamiriro anoitwa muhupenyu hwezuva nezuva sekusvibisa, traffic, tsvina, moto nezvimwewo. Sezvinoenderana nezita rayo, iwe unovaka guta rako pachako nekuisa dzimba, zvitoro nemafekitori, nezvimwewo nezvimwe uye nekuzvibatanidza uchishandisa network yemigwagwa nemigwagwa.
Ndiwo mutambo unonakidza une yakanakisa mifananidzo uye mimhanzi yepashure, kuyedza yako yekuvaka cum hunyanzvi hwekuvaka guta. Sezvo mutambo unoramba uchienderera, iwe unopa zvakanakisa kuvagari vako uye ugouya neguta rakabudirira. Mutambo unochengeta iwe wakanyura, kugadzirisa matambudziko, uye kubuda unokunda mukuita.
Yakatumidzwa neCodebrew mitambo muhomwe guta iri mhando yemaguta anovaka mutambo, yakafanana neSimCity. Inowanikwa pane ese ari maIOS uye Android mafoni. Kunze kweInternet, zvakare inogona kutamba isingaenderane mune ese ma portraits pamwe neyemamiriro emamiriro. Mutambo une yekutsanya uye smart mushandisi interface uye iri pakati pemamwe akanakisa ekuvaka guta-ekuenzanisa mitambo.
Kuva kuvakwa kwakavakirwa kunosanganisira kunakidzwa kwakawanda, maererano ne, kuvhura matsva anonakidza mashandiro sekusanganisa uye kuenzanisa kwemhando dzakasiyana dzezvivakwa uye zviitiko zvisina kujairika senjodzi dzemamiriro ekunze uye mapati anovharira. Izvi zvinoita kuti mutambo wacho unyanye uye unakidze.
Iyo ine zvese zvemahara uye zvepamberi shanduro. Iyo yemahara vhezheni iri chaizvo iri yepasi fomu yemutambo ine kushambadza kunosanganisirwa nepo iyo premium vhezheni inowanikwa pamutengo, pasina kushambadzira uye zvimwe zvekuwedzera maficha senge sandbox modhi.
Pocket guta rine rakangwara uye rinokurumidza mushandisi interface nekuramba uchigadzirisa kweayo maficha muiyo premium vhezheni kuti mutambo unyanye kunakidza uye kudhakisa. Iyo isometric yekuona dhizaini inoteverwa nekara-yakanyorwa makodhi uye pombi dzemvura zvinosiyanisa uye zviite iyo pakarepo inozivikanwa uye mutambo unoyevedza.
Yepamberi 3D mifananidzo yemifananidzo zvese mune imwe chete uye nemuenzanisi muoti iri inozivikanwa kwazvo yepamusoro mhando yekuvaka guta mutambo. Kunze kweiyo Android OS, inowanikwawo paMicrosoft Windows uye iOS. Icho chakareruka-basa 97.5 MB mutambo wakagadzirwa neSocial Quantum Ltd.
Kurega kufungidzira kwako kuchimhanya musango iwe unogona kugadzira guta riine Stonehenge, Eiffel Tower, chifananidzo cherusununguko, kana chero imwe shongwe yesarudzo yako muguta rako. Iwe unogona kuvaka dzimba, akawanda-akachengetedzwa masiketi, mapaki, Open Air Theatre (OAT), miziyamu, uye akawanda masisitimu akadaro evagari nekuda kwavo kwekutandara pamwe nemaitiro emutero wekugadzira pane zviripo uye nekupa zvirinani zvivakwa. zvivakwa.
Uyezve Verenga: 11 Yakanakisa Offline Mitambo Yeiyo Android Inoshanda Pasina WiFi
Uyu mutambo unokutendera iwe kumhanya yako yekufungidzira yemusango. SaMeya weguta, iwe unogona kuvaka uri guta rako uchichengeta vagari varo vachifara uye vachifambira mberi.
Iko mahara kurodha pasi nekumisikidza mutambo nezvakakosha zvinodikanwa zvekubatanidza netiweki. Kuita kuti mutambo unakidze iwe unogona zvakare kutenga zvimwe zvinhu zvemutambo nemari chaiyo kubva kuGoogle Appstore. Kana iwe usiri kufarira kushandisa chinhu ichi iwe unogona kuseta password kudzivirirwa yekutenga kubva kuGoogle Appstore.
Chekupedzisira, ini ndingati iwo mutambo unonakidza kuburitsa iyo yakavanda spark yemugadziri cum town kuronga mukati mako.
Uyu mutambo mutambo unonakidza weApple uye mamwe maSystem anoshanda kutevedzera guta raunosarudza. Kuburitsa rakavakirwa guta anovaka ruzha mauri, gadzira guta rine ese azvino metropolitan maficha pasina izvo zvisingadiwe.
Unogona kuvaka dzimba dzakazvimiririra uye dzimba dzimba uye skyscrapers dzinogarisa mahofisi evashandi. Earmark nzvimbo yeindasitiri nzvimbo uye kuvaka maindasitiri ane ekugadzira zvikamu. Iwe unogona zvakare kuvaka mamwe ekuvaraidza nzvimbo senge horo dzemamuvhi, mapaki, mweya-wakashama uye masvingo emitambo, mamuseum ekuvaraidzwa kwevagari veguta.
Vaka chivakwa chemauto ekukudziridza mamiriro ehunyanzvi zvombo uye kudzidzisa varwi kugadzirira kwehondo kudzivirira nyika kumhirizhonga. Iva nezvikoro uye makoreji evadzidzi vehukama. Simbisai mabasa ekukurumidzira kuti agadzirise chero nenjodzi dzinongoitika dzega kana dzevanhu dzakafanana nemoto, hosha, utsotsi nezvimwewo.
Wakavaka zvivakwa zvinodikanwa, batanidza nzvimbo dzakasiyana nemigwagwa yakanaka kuitira nyore kufamba.
Batanidza guta rako nemamwe maguta nemataundi kuburikidza nemugwagwa wakasarudzika, njanji uye netiweki yemhepo ine yepakati-yeguta bhazi, chiteshi chechitima, uye nhandare. Unogona kubatana neTheo Town discord server kune chero mamwe mazano.
Yakagadziridzwa neblueflower chinoita kuti mutambo unetse uye kusununguka, ndiko kugona kweasina kujairika emitambo maficha emutambo.
Mutambo uyu wakagadzirwa naKairosoft uye wakaburitswa muna2012 ndeimwe yemitambo yakavakwa yeguta inowanika paApple pamwe neanoshanda masystem eIOS Mutambo wacho wagamuchira wongororo dzakanaka kubva kuvatsoropodzi. Nheyo yekutanga yemutambo ndeyekuti mutambi anofanirwa kukoka magamba kumusha kwake nekuvatungamira kunorwa nemhuka kunze kweguta.
Mune izvi kukwezva magamba kumusha musha zvivakwa zvitsva zvakavakirwa kupa ese marudzi ezvivakwa zvekudzidzisa kumagamba, zviitiko zvakasiyana siyana zvinoitirwa kuunza mukurumbira kumusha, izvo zvinobatsira kudhonza mune mamwe magamba anorwisa iyo whimsical monster. Kufambira mberi mumutambo uyu mutambi anofanirwa kusarudza uye kusarudza huwandu hwemagamba ekurwisa uye kukunda chikara uye kuchengetedza musha.
Uyu mutambo wakatsikiswa neSphere Games Studio -City kuvaka mitambo inowanikwa kune Android inoshanda sisitimu. Iwo mutambo unonakidza uyo unopa nzwisiso yezvekuronga kwedhorobha zviitiko. Ndiwo mutambo wakasununguka zvachose pasina chikonzero chekubatanidza internet.
Unogona kukwezva vanogara kuguta rako nekuvaka dzimba dzekugadzira yeavo vanogona kuwana uye dzimba dzinoyevedza uye masiketi ane zvese zvazvino uno senge mapaki, nzvimbo dzemunharaunda, misika, dzimba dzeCinema. Ita shuwa nemugwagwa wakanaka, njanji, uye nekubatana nemhepo nekupa mamiriro ehunyanzvi mabhazi-anomira njanji nendege.
Chinotevera chakanyanya kukosha imigwagwa yakanaka mukuchengeta nekusimudzirwa mumotokari kwemakumi maviri-matatu emakore anotevera kudzivirira kusangana. Wedzera bhizinesi, indasitiri, uye kushanya. Kukurudzira indasitiri yekushanya kuvaka miziyamu yenyika, nyanza, uye wedzera zvikwangwani zvakakurumbira seBigben, Qutab Minar, uye chero zvivakwa zvekusarudza kwako kuguta rako nzvimbo. Panogona kuve nezvakakosha zvekurudzira dzimba dzekurima kuti upe chikafu kune vako vagari.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki iro dhizaini dhizaini rinofanira kumira kuzita rayo rakakodzera vanhu veese mazera uye ruzivo, micro-yakakwanisa kuunza kugutsikana uye mufaro kuvagari vayo.
Ndiwo mutambo unogona kutambwa zvese zviri kunze kwenyika uye online uye rakateerana kuCity Island 1 & 2. Anemabhizimusi ane ruzivo rwemuvaki, iwe unayo imwe mari negoridhe uye wotanga kubva kuvaka imba yako wega uye kufambira mberi kuenda kumusha, uchipedza kuvaka guta umo iwe unoshandura kuita metropolis seyakanaka kuronga guta.
Iine inlay yakakodzera yemigwagwa inosangana yekugara, bhizinesi, uye nzvimbo dzekutengesa iwo mutambo wakanaka kuvaka guta rine skyscrapers, nyanza, nzvimbo dzevaraidzo senge cinema horo, dzimba dzemitambo, nezvimwewo kushandura chitsuwa kuva guta rine zvese zvaro bishi uye kubatikana. .
Iko mahara kutamba guta rekuvaka mutambo weiyo android. Ndiwo mutambo unotanga kubva kune vekutanga vavhimi, Stone Age nguva kusvika pakuvakwa kweguta remazuva ano rine zvese zvakarongedzwa zvakanaka. Vaka dzimba dzakarongedzwa zvakanaka uye skyscrapers dzakawandisa-dzimba dzekugara uye dzekutengesa maficha uye uve nerudzi rwemberi kuburikidza nekutonga kwakakwana kwenzvimbo dzakakundwa dzakashandurwa kuita kuronga maguta nemaguta.
Vagari veguta vane dzidzo yakanaka kuburikidza neyakagadziriswa-yakarongeka zvivakwa zvezvikoro uye makoreji. Darika nguva yavo yekuzorora nekufamba uchidzika kupaki kana nyanza kana nzvimbo yekutengesa ine misika yakanaka uye uchidya macum ekutenga majoini. Iko hakuna kumira kubva pakuvaka akakurumbira enhoroondo nzvimbo senge mapiramidhi eEjipitori, iyo Taj Mahal uye mamwe anozivikanwa epasirese-enhoroondo zviyeuchidzo, senzvimbo yekukwezva kweguta rako.
Iwe unogona kuva neuto rakasimba cantonment yemasoja ako uye nzvimbo yekuvandudza zvombo zvitsva seBhabha Atomic Research Center (BARC) chete yekuzvidzivirira kudzivirira kukanganisa kwevavengi. Pamusoro pesimba remauto rakasimba, unogona kutara uye kuvaka nzvimbo yekutsvagisa nzvimbo yekutsvaga kwenzvimbo yekunze. Ratidza mweya wako wepasi rese wekutonga maererano neruzivo uye kugarisana murunyararo.
Ndiyo yedu runyorwa rwe9 akanakisa ekuvaka maguta emitambo iwe yaunogona kutamba pane Android. Asi pane runyorwa rukuru rwemimwe mitambo yekuvaka yeguta senge Townsmen uye Townsmen Premium, Hondo yePolytopia, Guta Island 5 rakateedzana kuGuta Island 3, Guta Mania, Virtual Guta 2: Paradise Resort, Forge yeMambo, Godus, Tropico, nezvimwewo zvechiitiko chisingakanganwike chemitambo. Mazhinji emitambo iyi yemahara mitambo yemafoni neyemhando yepamusoro inowanikwa pamutengo. Iyi mitambo inonakidza uye inogona kukuchengeta iwe uchinyura munguva yako yemahara kana panguva yekufamba, kuburitsa kuronga kweguta mukati mako.
\_ driver \_ wudfrd akatadza kutakura
ficha yekuvandudza kune windows 10, vhezheni 1803 yakundikana kuisa
touchpad isiri kushanda mushure me windows kugadzirisa
windows 10 yekukanganisa kutadza kukanganisa
windows haigone kubatanidza kune printa 0x0000007e
kuhwina 10 hakuzovharwa